Wararkii ugu dambeeyay maqnaanshaha Prof. Cabdiwahaab Sh. Cabdisamad | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay maqnaanshaha Prof. Cabdiwahaab Sh. Cabdisamad
Wararkii ugu dambeeyay maqnaanshaha Prof. Cabdiwahaab Sh. Cabdisamad
Prof. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida Kenya ayaa la la’yahay tan iyo Arbacadii, ka dib markii koox aan la garanayn ay ka qafaasheen Bartamaha Magaalada Nairobi.
Prof. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa ahaa Agaasimaha Machadka Daraasaadka Istiraatiijiyadda ee Geeska Afrika, waana khabiir ka faallooda arrimaha Somaliya iyo gobolkaba.
Qoyskiisa waxay sheegeen inay ka baadigoobeen dhammaan Saldhigyada Booliska ee Magaalada Nairobi, balse aanay ka soo helin.
Goobjoogeyaal ayaa Warbaahinta u sheegay in afar nin ay jujuubeen ninkaasi, deetana ay ku kaxeysteen gaari uu horey ugu sii diyaarsanaa darawalkii gaariga. Barraha bulshada ayaana goor dambe lagu faafiyay taarigada gaarigaasi.
Xaaskiisa, Xaliimo Maxamed oo la hadashay Warbaahinta ayaa sheegtay inaysan sheegi karin cid ay colaad kala dhaxeysay saygeeda iyo cid ay ku tuhmi karaan maqnaanshihiisa, balse hay’adaha amniga laga doonayo inay soo caddeeyaan halka uu ku dambeeyay.
Aqoonyahanka ayaa maqaalada ku qori jiray wargeysyada ugu afka dheer ee dalkaasi, iyadoo maqaaladiisu ka mid yihiin kuwa loogu akhriska badan yahay.
Maqaalkiisii ugu dambeeyay ayuu kaga hadlay, sida Dowladaha Somaliya iyo Kenya ay dib ugu soo celin karaan xiriirkooda diblomaasiyadeed.
Inkastoo Saraakiisha Booliska aanay weli ka hadlin maqnaanshaha Prof. Cabdiwahaab, haddana xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay wadaan baaritaan, ay sheegeen inaysan ka hordhici karin.
Previous articleMadaxweyne Qoorqoor oo safar degdeg ah ku tagay Magaalada Muqdisho
Next articleCabdiqaasim Salaad oo Madaxweyne Farmaajo ka codsaday in khilaafka la joojiyo